VaTaliban vanotora $ 12.3 miriyoni mumari nemari yegoridhe kubva kune vaimbove vakuru, voidzorera kubhanga renyika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Afghanistan Kuputsa Nhau » VaTaliban vanotora $ 12.3 miriyoni mumari nemari yegoridhe kubva kune vaimbove vakuru, voidzorera kubhanga renyika
Afghanistan Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
VaTaliban vanotora mamirioni gumi nemaviri emamiriyoni emadhora nemari negoridhe kubva kune vaimbove vakuru, vanoidzosera kubhanga renyika
Mari nemari yegoridhe zvakawanikwa neTaliban mudzimba dzevaimbove vakuru vakuru veAfghan mahofisi nemahofisi emuno eakaimbova hurumende yevasori uye vakadzoserwa kuhomwe yeDa Afghanistan Bank, rakadaro bhangi muchirevo.
VaTaliban vanotora madhora gumi nemaviri emamiriyoni nemari negoridhe kubva kudzimba nemahofisi evaimbove manejimendi eAfghan.
Zvinhu zvakatorwa zvakapihwa nevakuru veTaliban kuDa Afghanistan Bank rinova bhanga guru renyika.
Sekureva kweshoko rebhangi, kuendesa zvinhu kunoratidza kuzvipira kweTaliban kuve pachena.
Da Afghanistan Bank (DAB), bhanga guru renyika, raburitsa chirevo nhasi richizivisa kuti vaTaliban vapa mari inosvika mamiriyoni gumi nemaviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica nemari yegoridhe kuvakuru vebhangi.
"Vakuru veIslam Emirate yekuAfghanistan nekupa midziyo iyi kuhomwe yenyika yakaratidza kuzvipira kwavo pachena," Da Afghanistan BhangiChirevo chakadaro.
Mushure mekutora guta guru reKabul muna Nyamavhuvhu 15, iyo Taliban yakazivisa kuumbwa kwehutongi hurumende munaGunyana 7, ichigadza makurukota akati wandei uye gavhuna anoshanda kubhanga guru reAfghan.
Da Afghanistan Bhangi ndiro bhanga repakati reAfghanistan. Iyo inodzora ese emabhengi uye ekugadzirisa mari mashandiro muAfghanistan. Bhanga parizvino rine matavi makumi mana nematanhatu munyika, nemashanu aya ari kuKabul, uko kumuzinda webhangi iri zvakare.
The Taliban vatora masimba muAfghanistan mavhiki maviri US isati yagadzwa kupedzisa mauto ayo mushure mehondo inodhura yemakumi maviri emakore.
Vapanduki vakapinda nepakati penyika, vachitora maguta ese makuru mune mazuva mashoma, mauto eAfghan ekudzidzisa uye akashongedzerwa neUS nevakabatana navo vakanyungudika.
Vaimbove Mutungamiri weAfghanistan, Ashraf Ghani akahwandira pasi uye akataura mashoma paruzhinji apo maTaliban akapfuura nenyika. Sezvo maTaliban akasvika kuguta guru reKabul, Ghani akatiza Afghanistan, achinzi aine $ 169 mamirioni mumari yakapambwa, achiti akasarudza kubva munyika kuti arege kudeura ropa.
VaTaliban vakatsvaga kuzviratidza seuto rine mwero mumakore achangopfuura. Kubva zvavakatora nzvimbo, vakavimbisa kuremekedza kodzero dzevakadzi, kuregerera avo vakarwa navo nekudzivirira Afghanistan kuti isashandiswe sehwaro hwekutyisidzira. Asi vazhinji veAfghan vanofungidzira zvipikirwa izvi.